Mashoko Akanaka Akanyorwa naMako 2:1-28
Jesu anoporesa munhu akaoma mutezo (1-12)
Jesu anoshevedza Revhi (13-17)
Mibvunzo pamusoro pekutsanya (18-22)
Jesu, ‘Ishe weSabata’ (23-28)
2 Asi pashure pemazuva, akapindazve muKapenaume, uye shoko rakafamba rekuti akanga adzoka kumba.+ 2 Uye vanhu vazhinji vakaungana zvekuti pakanga pasisina nzvimbo, kunyange nepasuo chaipo, uye akatanga kuvaparidzira shoko.+ 3 Vakamuunzira mumwe murume akaoma mutezo, akanga akatakurwa nevarume vana.+ 4 Asi vakanga vasingakwanisi kumuunza paiva naJesu chaipo nemhaka yekuwanda kwevanhu, saka vakavhura denga remba nechepakanangana nepaiva naJesu, uye vakadzikisa murume wacho naipapo akarara pakamubhedha. 5 Jesu paakaona kutenda kwavo,+ akati kumunhu wacho akaoma mutezo: “Mwanangu, zvivi zvako zvaregererwa.”+ 6 Paivawo nevamwe vanyori vaivapo, vainge vakagara vachifunga nechemumwoyo+ kuti: 7 “Munhu uyu ari kutaurirei saizvozvi? Ari kumhura. Ndiani angaregerera zvivi kunze kwaMwari chete?”+ 8 Asi Jesu akabva angoziva mumwoyo make kuti vakanga vachifunga saizvozvo pakati pavo, saka akati kwavari: “Muri kufungirei zvinhu izvi mumwoyo menyu?+ 9 Ndezvipi zviri nyore, kuti kumunhu akaoma mutezo, ‘Zvivi zvako zvaregererwa,’ kana kuti, ‘Simuka, utore mubhedha wako, ufambe’? 10 Asi kuti muzive kuti Mwanakomana wemunhu+ ane simba rekuregerera zvivi panyika—”+ akati kumunhu wacho akaoma mutezo: 11 “Ndinoti kwauri, Simuka, tora mubhedha wako, uende kumba kwako.” 12 Akabva angosimuka pakarepo akatora kamubhedha kake, akabuda vese vachiona. Saka vese vakashamiswa, vakakudza Mwari, vachiti: “Hatisati tamboona zvakadai.”+ 13 Akaendazve kumhenderekedzo yegungwa, uye vanhu vazhinji vakaramba vachiuya kwaari, akatanga kuvadzidzisa. 14 Uye paakanga achifamba, akaona Revhi mwanakomana waArifiyosi akagara pahofisi yemutero, akati kwaari: “Iva muteveri wangu.” Akabva angosimuka, akamutevera.+ 15 Pava paya, aidya mumba make, uye vateresi vazhinji nevatadzi vaidya naJesu nevadzidzi vake, nekuti paiva nevazhinji vavo vaimutevera.+ 16 Asi vanyori vevaFarisi pavakaona kuti akanga achidya nevatadzi nevateresi, vakatanga kuti kuvadzidzi vake: “Sei achidya nevateresi nevatadzi?” 17 Jesu paakazvinzwa, akati kwavari: “Vaya vakasimba havadi chiremba, asi vaya vanorwara vanomuda. Handina kuuya kuzoshevedza vanhu vakarurama, asi vatadzi.”+ 18 Vadzidzi vaJohani nevaFarisi vaiwanzotsanya. Saka vakauya, vakati kwaari: “Nei vadzidzi vaJohani nevadzidzi vevaFarisi vachitsanya, asi vadzidzi venyu vasingatsanyi?”+ 19 Jesu akabva ati kwavari: “Shamwari dzemurume ari kuroora dzinotsanya here kana dzichiinaye? Kana murume wacho ari kuroora+ achiripo hadzitsanyi. 20 Asi mazuva achauya padzichatorerwa murume iyeye,+ uye dzichabva dzatsanya pazuva iroro. 21 Hapana munhu anosonera chigamba chejira idzva panguo yekunze tsaru. Kana akadaro, chigamba chitsva chinobva panguo tsaru, uye pakabvaruka pacho panobva patowedzera.+ 22 Uyewo, hapana munhu anoisa waini itsva muhomwe dzematehwe tsaru. Kana akadaro, waini yacho inobvarura homwe dzacho, yorasika, homwe dzacho dzoparara. Asi waini itsva inoiswa muhomwe dzematehwe itsva.” 23 Paakanga achipfuura nemuminda yezviyo* paSabata, vadzidzi vake vakatanga kutemha hura dzezviyo vachifamba.+ 24 Saka vaFarisi vakati kwaari: “Ona! Vari kuitirei zvisingabvumirwi nemutemo paSabata?” 25 Asi iye akati kwavari: “Hamuna kuverenga here zvakaitwa naDhavhidhi nevarume vaaiva navo pavakanga vasina zvekudya, vaine nzara?+ 26 Munhoroondo yaAbhiyatari,+ mutungamiriri wevapristi, Dhavhidhi akapinda muimba yaMwari akadya chingwa chekuratidza, icho chisingabvumirwi nemutemo kuti chidyiwe nemumwe munhu kunze kwevapristi,+ uye akapawo vamwe varume vaakanga ainavo?” 27 Akabva ati kwavari: “Sabata rakaitirwa munhu,+ kwete kuti munhu akaitirwa Sabata. 28 Saka Mwanakomana wemunhu ndiye Ishe kunyange weSabata racho.”+